Mayelana NATHI - IMBONI YOKUPHUQA IMPAMA
Imboni Yokudonsa YAMADAYE
Imboni yamapayipi e-DEYE yinkampani yeqembu ehlanganiswe ne-R & D, ezokukhiqiza nezokumaketha kuValve Industry, sigxile ekutholeni izixazululo zePiping izidingo zezimboni nokunikeza insizakalo yobungcweti kuwo womabili ama-valve ajwayelekile namaphayiphu enziwe ngokwezifiso nezinsimbi zamaphayiphu, izingxenye zamapayipi zifaka ama-flanges esiphikisayo, ama-gaskets, amabhawodi namantongomane.
Imboni yakwaDeye Piping isungula imihlangano yokufundisana emibili yokukhiqiza amaValves. I-DEYE valve (Wenzhou) igxila kuma-valves we-API we-Oyili negesi, i-Petrochemical ne-Sea Water.
I-DEYE Valve (Hebei) Gxila kuma-valve ekwelashweni kwamanzi nokusetshenziswa kwamapayipi. Ivelufa Yamanzi Okuphuza Inesitifiketi esivunyelwe se-WRAS.
Siphinde sibambisane namakhulu ama-valve akhiqizayo nabahlinzeki bezinhlobo ezahlukahlukene zama-valve, izingxenye zama-valve, ukusakaza nokwenza izingcezu. Nethimba elinokuhlangenwe nakho kweminyaka engu-12 lokuthenga & onjiniyela bephrojekthi abathathu & nabahloli bokulawulwa kwekhwalithi abangu-6. I-DEYE inobungcweti futhi inamasu anele okukutholela ama-valve afanele.
Manje ububanzi bethu bokuphakela ama-valve buhlanganisa ngezansi
Ama-valve we-API 6D / API600: Amaphayiphu wokuhlola ama-Gate Valves, ama-Globe valve, ama-plug plug, ama-valves ebhola.
Ama-valve ka-butterfly we-API609. Amaphayiphu wevemvane angaphezulu kwamathathu, ama-valve we-Eccentric Butterfly.
BS1868 Swing isheke valve
API602 kokuzihlanganisa valve nge umfutho ophakeme kuze kube 4500LBS.
BS5163 & BS6364 Rising & Non Rising amasango valve amanzi.
I-DIN3352 F4 / F5 / F7 DIN3202 Ama-valve wamanzi wensimbi / wensimbi.
AWWAC504 / C500 / AWWAC519 / C515 Amaphayiphu amanzi.
Flanges, gaskets, imishudo & Nuts.
Amapayipi angenamthungo / ashiselwe.
Isixazululo Somthombo Owodwa
Amakhasimende ethu anokukhetha okuphelele kwezinto zokusika nezomzimba, ama-bypasses kanye nezixhumi kufaka phakathi: izinkomba zokuphakamisa, ama-actuator womoya kanye nogesi, ama-bevel gearings, amasondo wamaketanga, iziqu zokunweba, ama-lever nama-adapters.
Ibanga lokucindezela kwe-Cast Valve lisuka ku-150 # thru 1500 # nezilinganiso zokushisa eziphansi njengoku
-200 ° C. Ochwepheshe bethu nabo bangakwazi ukwenza ngezifiso ukumiswa ukuze kulingane nezidingo zakho. Ukusekelwa kwe-CAD & PDF Imidwebo nganoma yisiphi isidingo.
Ukusevisa nokuhlinzeka ngemikhiqizo emihle kakhulu ukuhlangabezana nezidingo zamakhasimende ethu.
Usizo lobuchwepheshe ukusekela iphrojekthi yekhasimende.
Ukubiza izindleko ngokusebenza okuphelele kweKhwalithi nokuhlinzeka ngezinsizakusebenza ezidingekayo ukuxhasa ukuzibophezela kwethu ekwenzeni imikhiqizo yethu, izinqubo kanye nezinsizakalo zamakhasimende.
● Imikhiqizo yenziwa futhi yahlolwa ngokuhambisana ngokuqinile ne-ASTM, ASME, API namanye amakhodi embonini kanye nokucaciswa njengoba kusebenza.
● Izitifiketi zezinto ezibonakalayo ziyatholakala uma kucelwa imininingwane echaziwe ye-ASTM / ASME yayo yonke imizimba yama-valve anikezwe ngama-DEYE namabhonethi nezinsimbi.
● Imishini yesimanje yokusebenza ngemishini nezinqubo zokuhlola eziqinile zazo zonke izingxenye kuqinisekisa ukunemba kobukhulu bazo zonke izingxenye.
● Izinqubo zokuqinisekisa ikhwalithi zifaka phakathi, i-100% yokuhlolwa kwe-hydrostatic kanye ne-pneumatic yawo wonke ama-valve ngokuhambisana ngokugcwele namazinga we-API namakhodi wemboni.
● Izici zamakhemikhali nezomshini zensimbi yensimbi yensimbi ziyalandeleka ngokuphelele endaweni yokuqala yokushisa.
I-DEYE Valve inamathele kukhwalithi njengokubalulekile, inamandla amakhulu okuthuthuka kwezobuchwepheshe, imishini yokuqala yokucubungula nokuhlola, uhlelo lokuphatha oluqhutshwa ngokuqhubekayo ukuqinisekisa ukusebenza nekhwalithi ye-DEYE valve.
Ehola ngomqondo wayo oyinhloko wokuhlushwa nobuchwepheshe, i-DEYE izosebenzela wonke amakhasimende ayo amasha futhi ajwayelekile ngokucophelela nangobuchwepheshe ngemikhiqizo emihle kakhulu